GAROOWE, Puntland- Madaxweynaha dowladda Federaalka Soomaaliya, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, iyo Madaxweynaha Puntland, Cabdiwali Maxamed Cali, ayaa galinkii dambe maanta si wadajir ah ula hadlay warbaahinta.
Mas'uuliyiintan oo shir jaraa'id ku qabtay xarunta Madaxtooyada Puntland, ayaa ka warbixiyay socdaalka Madaxweynaha Soomaaliya, uu ku yimid magaalada Garoowe iyo safar la filayo inay ku tagaan qaybo kamid ah gobollada dowlad goboleedka Puntland.
Madaxweynaha Puntland, ayaa sheegay inay ku faraxsanyihiin booqashada Farmaajo iyo xubnaha kala socda dowladda Soomaaliya, wuxuuna sheegay in socdaalkoodu la xariiro sidii ay u ogaan lahaayeen xaaladda guud iyo amniga.
Madaxweyne Farmaajo, ayaa isna sheegay in socdaalkan uu ku yimid Puntland dhowr jeer oo hore baaqday, sababtuna ahayd duruufo jira, wuxuuna shacabka Puntland ka raali galiyay inta uu kasoo daahay.
Farmaajo, wuxuu shir saxaafadeedkiisan ku sheegay inuu la kulmi doono qaybaha kala duwan ee bulshada, gaar ahaan odoyaasha dhaqanka iyo waxgaradka si u uga waraysto xaaladaha jira.
Isagoo sii hadlaya, wuxuu tilmaamay inuu tagi doono dhowr magaalo oo uusan shaacin, isagoo xusay in arrintan qayb ka tahay dedaalka dowladdu ugu jirto kawar qabka xaaladda guud.
Shirkan jaraa'id ayaa yimid kadib markii maanta wafdi miisaan culus ay soo gaareen Garoowe, kuwaasoo soo dhaweyn diiran loogu sameeyay gudaha iyo garoonka cusub ee diyaaradaha Garoowe, kaasoo aan wali la dhammaystirin dhismihiisa.
Diyaaradii waday Farmaajo, ayaa noqotay tii ugu horaysay ee ka dagtay muddo labo sano ah oo garoonka dhismo lagu wado, waxayna timid xilli la filayo in barri si KMG ah xarigga looga jaro.
Booqashada Farjaamo ee Puntland waa markii ugu horaysay noloshiisa, waxayna kusoo aadaysa xilli xukuumadda hada jirta 08 Janaayo ay u dabaal dagayso 4 sano guuradii kasoo wareegtay markii ay xilka qabatay.
Musuq-maasuq lagu sameeyay xulka kubadda Cagta Puntland
Puntland 14.12.2017. 01:48
Gaas oo shir isugu yeeray Madaxda Maamullada Soomaaliya [Akhri]
Puntland 10.02.2018. 14:01
Garoonka Garoowe oo loo baxshay General Maxamed Abshir [Sawirro]
Puntland 08.01.2018. 12:35